Todika Ao Amin’ny Tontolon’ny Bilaogy Tiorka 2005 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Desambra 2017 3:09 GMT
Manana rohy mahaliana momba ny boky fampianarana antsoina hoe “Iza ireo Tiorka” i Zik Zak raha tianao ny hianatra bebe kokoa momba ny vahoaka Tiorka. Manana tranonkala mahaliana amin'ny vaovao farany momba an'i Tiorkia kosa i Turkish Digest. Mavi Boncuk indray manana boky fanadihadiana mahaliana sasany, tahaka ireto boky telo vaovao ireto: The Young Turks (Tanora Tiorka) avy amin'i Moris Farhi, Ireo Yezidis avy amin'i Eszter Spat, ary ny nahandro Sufi avy amin'i Nevin Halici. Mustafa Akyol ao amin'ny The White Path, izay manoratra momba ny lafiny maro ara-tsosialy/politika ao Tiorkia kosa mifantoka amin'ny famoronana marani-tsaina sy ny Tambajotra Famoronana Marani-tsaina izay nangatahana azy vao haingana hidirany ho mpikambana. Idil avy ao amin'ny Ignore Me If You Can (Aza raharahiana aho raha azonao atao) nanoratra vao haingana momba ny horohorontany tany Égée, izay nampanahy ny Tiorka maro ao amin'ny faritra, indrindra ireo monina any Istanbul sy Izmir, izay nijaly mafy tamin'ny Horohorontany tamin'ny taona 1999. Murat avy ao amin'ny Amerikan Turk indray nametraka ny sariny vao haingana tao amin'ny raki-tsary VELONEWS. Misaintsaina ny habetsaky ny fanarahamaso teo amin'ny fiainany kosa i Mert Ulas, ary ny endriky ny rafitry ny fomba fiasa tonga lafatra. Socioeconomics kosa manana vakiteny mahaliana momba ny eritreritra mandalo momba ny Fanjakana sy ny olombelona*.
Vitsy kely no nosoratana momba ny gripam-borona tany Torkia tamin'ity herinandro ity, na dia nanoratra momba ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety nataon'ny governemanta Tiorka aza i Idil avy ao amin'ny Metroblogging Istanbul, mba hampisehoana fa tsy misy maharatsy ny mihinana volom-borona. Zavatra iray mahaliana hafa avy ao amin'ny Metroblogging Istanbul ny momba ny tetikasa antsoina hoe Face of Tomorrow (Endriky ny Rahampitso), izay ahitana sarin'ireo olona samihafa avy amin'ny faritra samihafa natambatra mba hamoronana endrika tokana, afaka mahita ny tavan'i Istanbul ianao ato.
Satria marobe ireo bilaogy Tiorka (Blog Kardesligi irery no voatanisa mihoatra ny in-800) mihevitra aho fa hanomboka hanasongadina zavatra telo tena mahaliana indrindra amin'ity herinandro ity … Koa ireto ny telo voalohany tamin'ity herinandro ity:
1. Kutuphane (Tranomboky amin'ny teny Tiorka) izay mitatitra momba ireo tranomboky samihafa.
3. Bilaogin-tsary mahavariana hita ao amin'ny Tenturdiyot.